4th quarter 2074/75(4th quarter 2074/75) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको नाफामा २०.५९% प्रतिशतको फड्को, अन्य सूचक औसत
काठमाण्डौ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३३ करोड ३० लाख बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो कम्पनीको नाफा २७ करोड ६२ लाखमा सीमित थियो । यसरी कम्पनीले खूद नाफामा गत वर्षको तुलनामा २०.५९ प्रतिशतको फड्को मारेको छ । कम्पनीले खूद बिमा शुल्क आर्जनमा पनि राम्रो प्रगति गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ६३ करोड ८१...
सर्वाधिक महंगो सेयरमूल्य भएको कम्पनीको नाफामा झिनो प्रगति, इपीएस कति ?
काठमाण्डौ । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीमध्येकै महंगो युनिलिभर नेपाल लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९९ करोड ९४ लाख खूद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९६ करोड ५२ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको थियो । आ.ब. २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा मात्र २९ करोड २८ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको कम्पनीको चौथो त्रैमासको प्रतिसेयर आम्दानी ३१८ रुपैयाँ रहेको छ ।...
खूद नाफामा नेकोले हान्यो ३९.५५% को छलाङ, अन्य सूचकमा औसत प्रगति
काठमाण्डौ । नेको इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खूद नाफातर्फ कमालको प्रगति गरेको छ । यो कम्पनीले २९ करोड १० लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको हो । यो भनेको गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३९.५५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यो कम्पनीले २० करोड ८५ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको थियो । सोमबार कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा...
एनएलजीको नाफा २६ करोड बढी, अन्य सूचक औसत
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २६ करोड बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । यो निर्जीवन बिमा कम्पनीको अघिल्लो वर्षको खूद नाफा २३ करोडमा सीमित थियो । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ७८ करोड २८ लाख बढी खूद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ७० करोड १२ लाख बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । एनएलजीले पुनर्बिमा...
संचालनको ११ महिनामै ज्योति लाइफको नाफा रु. १०.९ करोड
काठमाण्डौ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० करोड ९० लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो त्रैमासको अन्तसम्म यो नयाँ बिमा कम्पनीको खूद नाफा ६ करोड ४६ लाखमा सीमित थियो । यो जीवन बिमा कम्पनीले २०७४ भदौ १९ गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २७ लाख ७५ हजार बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । लगानी, कर्जा...
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको खूद नाफामा २२.७१% को प्रगति
काठमाण्डौ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २७ करोड ५३ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीको अघिल्लो वर्षको यही अवधिको खूद नाफा २२ करोड ४३ लाखमा सीमित थियो । यसरी खूद नाफातर्फ कम्पनीले २२.७१ प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ । समीक्षा अवधिमा सगरमाथाले १ अर्ब ७८ करोड बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ५० करोड आर्जन...
काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक बन्न सफल भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ अर्ब ३२ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा २ अर्ब ७७ करोडमा सीमित थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खूद नाफातर्फ ५५.९१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिएको छ । बैंकले यो अवधिमा १ अर्ब ५१ करोड...
वाणिज्य बैंकले ३८ अर्ब बढी लाभांश बाँड्नसक्नेः नाफा आर्जनमा को अगाडि ? कसको प्रगति कति ?
काठमाण्डौ । देशका २७ वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लाभांशको रुपमा ३८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा केही बढी रकम बाँड्नसक्ने हैसियत बनाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले समीक्षा अवधिमा ४८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खूद मुनाफा आर्जन गरेका छन् । यही तथ्यांकबाट उनीहरुको लाभांश क्षमता २८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा केही बढी देखिएको हो । बैंकहरुले आर्थिक...
बुटवल पावरको नाफामा झिनो वृद्धि, इपीएसमा गिरावट
काठमाण्डौ । बुटवल पावर कम्पनी लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म ७१ करोड २४ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा नाफामा ६.६५ प्रतिशतको प्रगति गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको खूद नाफा ६६ करोड ८० लाखमा सीमित थियो । कम्पनीले विद्युत बेचेर ६६ करोड ७२ लाख आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ६६...
सानिमाको नाफामा सामान्य प्रगति, इपीएसमा पहिरो
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ६९ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ३० करोड मात्र नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ९९ करोडमा सीमित संचालन मुनाफालाई बढाएर बैंकले २ अर्ब ६० करोडको उचाईमा पुर्याएको छ भने २ अर्ब २४ करोडमा सीमित खूद ब्याज आम्दानी बढेर २ अर्ब ९३ करोडको उचाईमा...
काठमाण्डौ । हिमालयन बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म २ अर्ब ४७ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खूद नाफा २ अर्ब १७ करोडमा सीमित थियो । बैंकले संभावित जोखिम व्यवस्थापनबाट १ अर्ब ७ करोड बढी राइटब्याक गरी नाफा बढेको वित्तीय विवरण पस्किएको हो । बैंकले २ अर्ब ४४ करोडमा सीमित संचालन मुनाफालाई बढाएर २...
करिब ४५ करोड राइटब्याक गर्दा पनि सनराइज बैंकको नाफामा ११.५३% को मात्र प्रगति !
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ३१ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा १ अर्ब १७ करोडमा सीमित थियो । यो हिसाबले बैंकले ११.५३ प्रतिशतले मात्र नाफा बढाएको देखिन्छ । सनराइज बैंकले यो अवधिमा ४४ करोड ८६ लाख संभावित जोखिम व्यवस्थापनबाट फिर्ता ल्याएको देखिन्छ । बैंकले १ अर्ब ५८ करोडमा समीति...
बीओकेको औसत प्रगति, एनपिएलमा वृद्धि
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब ५४ करोड खूद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १ अर्ब ३१ करोड मात्र नाफा कमाएको थियो । बैंकले यो अवधिमा १२ करोड १७ लाख बढी राइट ब्याक गरेको छ । बैंकले १ अर्ब ७२ करोडमा सीमित संचालन मुनाफालाई बढाएर २ अर्ब १४ करोडको उचाई चुमाएको छ भने २ अर्ब ५६ करोड रहेको...